वीर अस्पतालले स्वीकृत टेन्डरलाई ५ दिनमै किन गर्‍यो रद्द?
साउन १, २०७४ आइतवार २३:०६:०० प्रकाशित
काठमाडौं– चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालले स्वीकृत गरिसकेको एउटा टेन्डरलाई शंकास्पद ढंगले रद्द गरेको छ।
स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न उपकरण खरिदका लागि असार २२ गते मूल्य अभिवृद्धि करसहित दुई करोड ७० लाख ६२ हजार रुपैयाँ कबोल गर्ने एक कम्पनीलाई अस्पतालले स्वीकृति प्रदान गरेको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो।
बोलपत्र आह्वानमा तोकिएको सबै प्रक्रिया पूरा गरी सबैभन्दा कम रकम कबोल गरेको अग्रिम इन्टरप्राइजेज/कस्मिक इन्टरप्राइजेजलाई अस्पतालले टेन्डर परेको भन्दै दैनिक पत्रिकामा असार २२ गते सूचना प्रकाशन गरी जानकारी गराएको थियो।
तर, त्यसको ५ दिनपछि अस्पतालले कुनै पनि कारण नखुलाई भूल–सुधार गरिएको भन्दै कम मूल्य कबोल गरिएको उक्त टेन्डर नै रद्द गरेको छ। अस्पतालले असार २७ गते अर्को सूचना प्रकाशित गर्दै पाँच दिनअघि प्रकाशित भएको बोलपत्र स्वीकृतिको सूचना हटाइएको भनेको छ। भूल सुधार गरिएको भन्दै प्रकाशित उक्त सूचनामा के कारणले पाँच दिन अगाडिको सूचनामा भुल भएको हो भन्ने स्पष्ट कारण नै खुलाइएको छैन।
अस्पतालले परिसकेको टेन्डर भूल सुधार गरी हटाएपछि कम रकम कबोल गरेको अग्रिम इन्टरप्रइजेज/कस्मिक इन्टरप्रइजेजले त्यसको कारण माग गरेको छ। तर, अस्पतालले हालसम्म कुनै पनि कारण नदिएको कम्पनीले जनाएको छ। अस्पतालका कर्मचारीले आफूले चाहेको कम्पनीलाई टेन्डर नपरेपछि कम रकम कबोल गर्ने कम्पनीको टेन्डर रद्द गरिएको भन्दै इन्टरप्राइजेजले विरोध गरेको छ।
गत चैत ३१ गते गरिएको सार्वजनिक बोलपत्र आह्वानमा उपकरण खरिदका लागि ६ वटा कम्पनीले आवेदन हालेका थिए। तीमध्ये अस्पतालले दर्ता हुन आएका बोलपत्रमध्ये असार २१ गतेको उपकुलपति स्तरीय निर्णय अनुसार कम रकम कबोल गरेको अग्रिम इन्टरप्रइजेज/कस्मिक इन्टरप्रइजेजको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २२ गतेको दैनिक पत्रिकामार्फत सार्वजनिक गरेको थियो।
उक्त मेसिन खरिदका लागि अग्रिम इन्टरप्रइजेज/कस्मिक इन्टरप्रइजेज सहित नेसनल बायो मेडिकल, सिन्धु सर्जिकल, म्याप इन्टरप्राइजेज, क्लिन टेक र कमलेस ट्रेड प्रालीले आवेदन हालेका थिए। तीमध्ये सबैभन्दा बढी क्लिन टेकको ५ करोड ७६ लाख ३० हजार रुपैयाँ थियो भने सबैभन्दा कम अग्रिमको २ करोड ७० लाख ६२ हजार ८ सय ३७ रुपैयाँ थियो।
यस्तै, नेसनलको ३ करोड ६७ लाख २५ हजार, सिन्धु सर्जिकलको ३ करोड ९३ लाख ३२ हजार ४ सय, म्याप इन्टरप्राइजेजको ३ करोड २४ लाख र कमलेस ट्रेडको ३ करोड १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ थियो।
अस्पतालका निर्देशक डा. भूपेन्द्र बस्नेतले प्रक्रियागत त्रुटिका कारण भुलबस बोलपत्र स्वीकृतको सूचना प्रकाशित भएकाले रद्द गर्नुपरेको दाबी गरेका छन्। तर, उच्च स्रोतका अनुसार कमिसनमा कुरा नमिलेपछि परेको टेन्डर समेत रद्द भएको हो।